Ny Honor Band 5 dia haseho amin'ity volana ity | Androidsis
Ny Honor 9X dia haseho amin'ity volana ity amin'ny fomba ofisialy, araka ny hitantsika tato ho ato. Betsaka ny tsaho momba ny fandefasana telefaona, noho ny vinavinany fa tsy ho tonga irery izy, satria mety hisy maodely Pro eo akaikiny. Nefa toa mbola hisy vaovao hafa, satria ny Honor Band 5 dia hatolotra miaraka amin'ity finday ity koa.
Ny bracelet amin'ny hetsika dia mitohy ho safidy mahaliana amin'ny tsena. Marika maro no mamela antsika amin'ny maodeliny. The Honor Band 5 Efa taranaka fahadimy izay nandao antsika ny marika sinoa. Tsy fantatray raha hisy fiovana maro raha oharina amin'ny taranany teo aloha.
Ny CEO an'ny orinasa no voalohany nilatsaka fa afaka manantena bracelet vaovao isika. Na dia mbola tsy voamarina aza fa ny Honor Band 5 haseho amin'ny 23 Jolay miaraka amin'ny telefaona. Saingy tsy hafahafa raha toa ka nanararaotra an'ity hetsika ity ilay marika mba hanolotra ny fehin-tànana vaovao. Fahita eny an-tsena izany.
Ankoatra izany, tamin'ny taon-dasa dia natolotra ny Honor 8X ny taranaka fahefatra. Noho izany, tsy ho hafahafa raha manaraka paikady mitovy amin'ity marika ity ity marika ity amin'ity andiany vaovao amin'ny fehin-tànany ity. Fehin-tànana mahazo vahana eo amin'ny tsena sy izay tadiavin'ny marika hararaotina.
Tsy maintsy miandry fanamafisana vitsivitsy isika amin'ny fahatongavan'ity Honor Band 5 ity. Tsy manana antsipiriany ihany koa izahay amin'izao fotoana izao momba an'ity taranaka vaovao ity amin'ny brasele. Ka manantena izahay ny hahafantatra mialoha ny momba ny drafitra nomanin'ilay marika miaraka aminy, amin'ny lafiny fanatsarana sy asa vaovao.
Raha marina fa haseho azy ny Honor 9X, ao anatin'ny telo herinandro dia efa tokony ho fantatsika ity Honor Band 5. Ka fohy ny fiandrasana amin'ity lafiny ity. Saingy manantena izahay fa hisy ny fanamafisana avy amin'ny mpanamboatra sinoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ho tonga miaraka amin'ny Honor 5X ny Honor Band 9
OnePlus dia hanome antoka ho an'ny telefaona nafarana avy any Shina